Finance for SMEs - PAÑÑĀ Online School
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ဆဲနှင့် စတင်လုပ်မည့်သူများ၊ Finance နှင့် ပတ်သက်သော လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်မည့်သူများ၊ Finance ဘာသာရပ်ကို အခြေခံမှစ၍လေ့လာသင်ယူလိုသူများ တက်ရောက်သင့်ပါသည်။
Daw Nan Khaing Sandar Lwin
Nan Khaing Sandar Lwin, after acquiringabachelor in Nursing at the University of Nursing in Yangon, earnedadiploma in Public Management (University of Toulouse, France). She worked asalanguage i... More
U Aung Naing Moe
Director of Planning & Finance (Golden Palace Gold & Jewelry Group of Companies)
Mr. Moe isamember of United GP Holding’s steering committee withafocus on the formulating and executing of growth strategies. His recent experience includes leading role in 68 Residence Luxury Co... More
Faculties : Daw Nan Khaing Sandar Lwin|;|10
Commitment : 60 Mins
Finance ရှုထောင့်မှ ကြည့်ပြီး စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ အပေါ်တွင် ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချနိုင်ရန်
Accounting နှင့် Financial Statement များကို ကြည့်ပြီး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဧ။် ငွေကြေးများကို အကျိုးရှိရှိ အသုံးပြုနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
01. Role of Finance in Business
05. Critical Performance Factors
Commitment : 50 Mins
ဘာကြောင့် Start up ကုမ္ပဏီတွေမှာ Finance Planing က အရေးကြီးသလဲ…
ဘယ်လို Planning တွေလုပ်မှာလဲ…
Start up ကုမ္ပဏီတွေအတွက် ငွေကြေးဆိုင်ရာ ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုတွေကို ဘယ်လိုရနိုင် သလဲ ဆိုတာတွေကို ဖော်ပြပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
06. Start-Up Financing
07. The Need For Operating Funds
08. Financial Planning (Part 01)
09.Financial Planning (Part 02)
Faculties : U Aung Naing Moe|;|45
07. The Process Of Recording Business Transactions
09. Statement Of Changes In Equity And Statement Of Cash Flow
10. Financial Statement Notes